UTM ilungelelanisa kwiimephu zikagoogle -Geofumadas
Ikhaya/Iiphotography/UTM idibanisa kwiimephu zeGoogle
IiphotographyOkufumanekaGoogle umhlaba / imephuezintsha
UGoogle mhlawumbi sisixhobo esiphila kuso phantse ngeveki, hayi ukucinga ukuba yonke imihla. Nangona isicelo sisetyenziswa ngokubanzi ukuhamba nokuhamba ngeedilesi, akukho lula kangako ukujonga uququzelelo lwendawo ethile, okanye kwifomathi yejografi, kakhulu UTM kwiimephu zeGoogle
Eli nqaku, ngaphandle kokukubonisa indlela yokujonga ngayo i-Google Maps, iya kukufundisa ukuba ube yingcali ekuboniseni abo baququzeleli kwi-Excel, ukuguqula kwi-UTM kwaye ubenze nabo kwi-AutoCAD.
Utm ulungelelanisa kwiimephu zeGoogle
Kumboniso wangaphambili, imephu zikaGoogle ziyavela, kunye neendlela ezifanelekileyo zokufumana indawo. Ungafaka idilesi ethile phezulu, okanye igama lesixeko, okanye ngokukhangela kuluhlu olufunyenwe kwisibonisi esikwisandla sokunene.
Xa sele ukhethwe, imephu ikhona kwidilesi ekhethiweyo.
Singaqakraza nawuphi na apha kwimephu, kwaye sibonisa isibonakaliso soqhagamshelwano kwifomati yeshumi kunye nobulili (degrees, imizuzu kunye nemizuzwana).
Njengoko ubona, idesimali yokulungelelanisa i-19.4326077, -99.133208. Ithetha iidigri ezili-19 ngaphezulu kweikhweyitha kunye nama-99 degrees ukusuka kwimeridian yeGreenwich, ukuya entshona, ngoko ke iyathintela. Ngendlela efanayo, olu lungelelwaniso lwejografi lilingana nobubanzi be-19º 25 '57.39 ″ N, ubude obungu-99º 7' 59.55 ″ W. Icandelo eliphezulu libonisa UTM ulungelelanise X = 486,016.49 Y = 2,148,701.07 ehambelana nommandla we-14 enyakatho yelizwe.
Ilungile. Ngale nto ufundile ukufumana indawo kwimephu zikaGoogle kwaye uyazi ulungelelwaniso lwe-UTM.
Indlela yokugcina idibanisi ezininzi zeGoogle Maps.
Ngaphambili, kuye kwachazwa indlela yokujonga ngayo amaphuzu ngamabini, kokubili ukulungelelaniswa kwendawo kunye nokudibanisa kwayo kwi-Universal Traverso de Mercator (UTM).
Ukuba oko sikufunayo kukugcina amanqaku amaninzi kwiGoogle Maps kwaye sibone ngeso lengxelo kwifayile ye-Excel, ngoko kufuneka silandele le nkqubo.
Sifake iGoogle Maps, nge-akhawunti yethu ye-Gmail.
Kwimenyu ekhohlo sikhetha ukhetho "Iindawo zakho". Apha amanqaku esiwalebhile, iindlela okanye iimephu esizigcinileyo ziya kuvela.
Kweli candelo sikhetha "Iimephu" ukhetho kwaye wenze imephu entsha.
Njengoko ubona, kukho imisebenzi emininzi apha yokwenza iileya. Kule meko, ndenze amanqaku ama-6 e-vertic kunye ne-polygon. Nangona ukusebenza kulula, kuyakuvumela ukuba utshintshe umbala, isitayile senqaku, inkcazo yento kunye nokongeza umfanekiso kwivertex nganye.
Ke uye endaweni yomdla wakho kwaye uzobe umaleko ocinga ukuba uyimfuneko. Ingangumaleko wee-vertices, olunye ungqimba lweepoligoni zomhlaba kunye nolunye umaleko lwezakhiwo, ukuba uza kuzoba.
Emva kokugqiba, ukuyikhuphela, khetha amachaphaza amathathu alungileyo kwaye ulondoloze njengefayile kml / kmz, njengoko kuboniswe kumfanekiso olandelayo.
Iifayile ze-kml kunye ne-kmz zifomathi zeGoogle Maps kunye neGoogle Earth apho izilungiso, iindlela kunye neepolgoni zigcinwa.
Ilungile. Ufundile ukugcina amanqaku ahlukeneyo kwiimephu zikaGoogle kunye nokuzikhuphela njengefayile ye-kmz. Nantsi indlela yokubonisa ezi zilungelelaniso kwi-Excel.
Indlela yokubona i-Google Maps idibanisa kwi-Excel
I-kmz iseti yeefayile ze-kml ezixineneyo. Ke eyona ndlela ilula yokuyivula ngokungathi singayenza nge .zip / .rar fayile.
Njengoko kubonisiwe kumzobo olandelayo, asinakubona ulwandiso lwefayile. Ukwenza oku, kufuneka senze oku kulandelayo:
Ukhetho lokubona ukwandiswa kweefayile luyasebenza, ukusuka kwi "Jonga" ithebhu yomhloli wefayile.
Ulwandiso lutshintshiwe ukusuka kwi Ukwenza oku, unqakrazo oluthambileyo lwenziwa kwifayile, kunye nedatha emveni kokuba inqaku liguquliwe. Samkela umyalezo oza kuvela, osixelela ukuba siyatshintsha ulwandiso lwefayile kwaye inokwenza ukuba ingenakusebenziseka.
Ifayile ayicinezelwa. Iqhosha lasekunene le mouse, kwaye ukhethe "Khipha ku ...". Kwimeko yethu, ifayile ibizwa ngokuba yi "Geofmed Classroom Land".
Njengoko sibona, ifolda yenziwe, kwaye ngaphakathi ungabona ifayile ye-kml ebizwa ngokuthi "doc.kml" kunye nefolda ebizwa ngokuthi "iifayile" eziqulethe idatha ehambelanayo, ngokubanzi imifanekiso.
Vula i-KML kwi-Excel
I-Kml yifomathi eyandiswe nguGoogle Earth / iimephu, ezaziphambi kwenkampani yeKholehole, yiyo loo nto igama (uLwimi lweeNkqantosi zeKholehole), ke, yifayile enesakhiwo seXML (uLwimi lweMarket eXtensible). Ke ukuba yifayile yeXML kufuneka ibonwe kwi-Excel:
1 Sitshintshe ukwandiswa kwayo ukusuka .kml ukuya ku- .xml.
2. Sivula ifayile kwi-Excel. Kwimeko yam, ukuba ndisebenzisa i-Excel 2015, ndifumana umyalezo ukuba ndifuna ukuwubona njengetafile yeXML, njengencwadi yokufunda kuphela okanye ukuba ndifuna ukusebenzisa iphaneli yomthombo weXML. Ndikhetha ukhetho lokuqala.
3 Sifuna uludwe lweendawo zokudibanisa.
4 Sibakopisha kwifayile entsha.
Kwaye u-voila, ngoku sineefayile zikaGoogle ezilungelelanisa ifayile, kwitafile ye-Excel. Kule meko, ukuqala kumqolo we-12, kwikholamu u-U kuvela amagama ezinto, kwikholamu V inkcazo kunye nobude / ulungelelwaniso lobude kwikholamu X.
Ngoko, ngokukopisha iikholomu ze-X kunye nekholomu ye-AH, unayo izinto kunye nokulungelelaniswa kweeGoogle Maps.
Unomdla kwenye into?
Guqula izilungiso kwiGoogle Maps ukuya ku-UTM.
Ngoku, ukuba ufuna ukuguqula ezo zilungelelaniso zeendawo zokuhlala ukuba unesimo samazinga aphezulu aphezulu kunye nobude ukuya kwifom ehambelana ne-UTM yokubambisana, uze usebenzise itemplate ekhoyo.
Ziziphi izilungiso ze-UTM?
I-UTM (i-Universal Traverso Mercator) yinkqubo ehlula ihlabathi kwiindawo ze-60 ze-6 degrees nganye, iguqulwe ngendlela yemathematika ukuba ifane negridi efakwe kwi-ellipsoid; njengaye ichazwe kweli nqaku. kwaye kule vidiyo.
Njengoko ubona, apho ukopa izilungelelaniso eziboniswe apha ngasentla. Ngenxa yoko, uya kuba ne-X, Y kunye ne-UTM Zone ephawulwe kwikholamu eluhlaza, ekuloo mzekelo ubonakala kwiZone 16.
Thumela ii-Google Maps kwi-AutoCAD.
Ukuze uthumele idatha kwi-AutoCAD, kufuneka usebenze umyalelo we-multipoint. Oku kukwithebhu ethi "Zoba", njengoko kubonisiwe kumzobo osekunene.
Emva kokuba usebenze umyalelo we-Multiple Points, khuphela kwaye unamathisele idatha kwi-template ye-Excel, ukusuka kwikholam yokugqibela, kumgca we-AutoCAD umyalelo.
Ngale nto, izilungelelaniso zakho zitsaliwe. Ukuzijonga, ungasondeza / Zonke.
Ungathenga ithemplate nge Paypal okanye kwikhadi lekhredithi. Ukufumana itemplate kukunika ilungelo lokuxhasa nge-imeyile, xa unenkinga ngethemplate.
Iinyanga ze-Google Chrome 30 kamva
xhavani indlela yokuguqula iidilesi ukuya kulungelelaniso
U-HELLO NDIFUNA UKUZIPHATSHISA AMA-ADDRESS KWE-UTM ABASEBENZISIWEYO, UKUPHILA KWENKQUBO NOKUBHALA, NJENGOBA
Ndifuna ukusebenzisa i-utm idibanisa kwifowuni njengoko ndiyibonga
Ndiyayiqonda kodwa andinakuyichaza e-Espanyol:
I-Google Maps idinga ukulungelelanisa kwifomati yedesimali ngoko kufuneka uguqule izilungiso zakho ze-UTM ukuyibonisa.
Guqula izilungelelaniso ze-UTM kwiwebhusayithi yam - http://www.hamstermap.com kwaye ungaya kwiimephu zeGoogle ukuze uzibonise.
Ngaphandle koko, ukuba unendawo ezininzi zokubonisa, ungazibeka kwiGoogle Maps usebenzisa i-MAP ekhuselekileyo kwisixhobo kwindawo efanayo.
Yintoni eyenzekayo kukuba akusiyo isicelo seGoogle, nangona siphuhliselwe i-Chrome.
Kwaye ndicinga ukuba uGoogle ushiya izinto ezisisiseko kwezinye iinkampani ukuba zisebenzise kwaye ziphuhlise ...
Tremendo inkqubo, ndiya kuyifaka ngoku. Into engingayiqondiyo ayifaki ukuyisebenzisa njengesiqhelo kuzo zonke iiphequluli, kungakhathaliseki ukuba i-Chrome ivela kwi-Google, iya kuququzelela ukusetyenziswa kweemephu zeGoogle kuzo zonke iipulatifomu.
LUIS DE LA CRUZ uthi:
KULUNGILE KAKHULU KAKUHLE KAKHULU ...
Oku esihle umxokozelo-software free, undixelele ukuba basebenze nabo bonke referncias, ziluncedo kakhulu kobuntu nezobhalo echweba emideni ivaliwe gqitha yi mangroves kunye nam ah umsebenzi ngapha eh kusetyenziswa intliziyo google kwaye yahluke kakhulu le nto ngakumbi epheleleyo.
Agrim. UAntonio P. Rodriguez uthi:
Kukho amaxesha amanqaku ahle kakhulu apapashwe yi-geofumadas, enomdla kakhulu, gcina ngale ndlela.